कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको फितलो तयारी, जोखिममा नेपाल | एक्सप्रेस | GNN Nepal GNN Nepal कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको फितलो तयारी, जोखिममा नेपाल | एक्सप्रेस | GNN Nepal
कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको फितलो तयारी, जोखिममा नेपाल
चैत १० गते, २०७७ १४:०४ मा प्रकाशित
दक्षिणी छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीब्रगतिमा फैलिँदैछ । भारतको राजस्थान र महाराष्ट्रसहितका राज्यमा कोरोनाको दोस्रो लहरले संकट निम्त्याएको छ । संक्रमण अत्यधिक बढेपछि राजस्थानका मुख्य शहरमा मुख्यमन्त्री अशोक गहलोतले राज्यका विभिन्न ठूला आठ सहरमा रात्रि कर्फ्यू नै घोषणा गरेका छन्। एक सातामा मात्रै भरातमा कोरोना संक्रमण ६७ प्रतिशतले बढेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अघिल्लो साताको तुलनामा पछिल्लो सात दिनमा एक लाख कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। एक सातामा सबै गरेर दुई लाख ६० हजार जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भरातमा अहिले हरेक १२ दिनमा दुई गुणा संक्रमण बढीरहेको अवस्था छ।
यसरी छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दिनदिनै बढेपछि नेपालमा फेरि पनि जोखिम बढेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरे। विज्ञप्तिमा सभा, जुलुस, र्‍याली, भेला, जमघट, गोष्ठी, सेमिनार, बैठक र भीडभाड नगर्न आग्रह गरिएको छ साथै कोरोना रोकथाम गर्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दै सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गर्न, अनिवार्य मास्क प्रयोग र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न भनिएको छ । तर, त्यसको ठिक विपरीत आफैंले बनाएका नियम, मापदण्ड तोड्दै सरकार प्रमुखहरु नै सभा–सम्मलेन र भीडभाड गर्दै हिँडेका छन्। मास्क, सामाजिक दूरी र सरसफाइ त कसैलाई पनि याद भएको देखिँदैन। हजारौंको भीडले पुनः संक्रमणको भयावह स्थिति दोहोरिने त होइन भन्ने चिन्ता बढाएको छ। अहिले देशको राजनीतिक उतारचढाव र फितलो नीति नियमले कोरोना नेपालमा कहिल्यै आएकै थिएन जस्तो देखाइरहेको छ। मानिसहरु मास्क नलगाई हिडिँरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधानहरुमा पहिलेको जस्तो भीडभाड हुन थालिसकेको छ। भौतिक दूरी कायम हुन छाडिसकेको छ। महिनौंदेखि बन्द रहेका विद्यालय, सरकारी तथा निजी कार्यालयहरु तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट समेत खुलिसकेका छन्। बजारमा किनमेल गर्नको लर्कोले त झन् कोरोनाप्रतिको डर हटिसकेको जस्तो देखाउँछ। अझ भनौं कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा भित्रिएपछि त झन् स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न हेलचेक्र्याइँ गरिएको देखिएको छ । सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा घटाउँदै लगेको छ। जसको कारण कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या र मृत्यु हुनेको आकडा पनि निकै कम देखिएको छ ।
मुलुकमा कात्तिक तेस्रो सातादेखि दैनिक संक्रमितको संख्या निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको थियो । पछिल्लो समय त यो क्रम सयभन्दा तल ओर्लिएको थियो । कुनै बेला ४० हजार नाघिसकेको संक्रिय संक्रमितको संख्या पनि हजारभन्दा तल आइसकेको थियो । त्यस्तै कुनै बेला दैनिक ४० जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेकामा पछिल्ला दिन यस्तो संख्या एकल अंकमा झरिसकेको थियो, कुनै दिन त शून्य नै हुन्थ्यो तर, अचानक फेरि संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । चैत ३ यता दैनिक संक्रमितको संख्या पुनः सयभन्दा माथि चढ्न थालेको छ । सोमबार त १५० जना नयाँ संक्रमित थपिए । ठीक एक साताअघिको तुलनामा यो संख्या अढाई गुणाले बढी हो ।
निष्क्रिय होल्डिङ र क्वारेन्टिन सेन्टर
भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै नेपालीहरु स्वदेश फर्किन थालेका छन् । भारतका केहि प्रदेशमा लकडाउन गरिएपछि रोजगारीमा रहेका नेपालीहरु घर फर्किन लागेका हुन्। यसरि धमाधाम नेपालीहरु स्वदेश फर्कि रहँदा कोभिड–१९ को महामारीका समयमा सञ्चालन गरिएका अधिकांश क्वारेन्टिन सेन्टर भने अहिले निष्क्रिय छन् ।
आहिले सार्वजनिक स्थान, विद्यालय, तथा सरकारी भवनमा स्थापना गरिएका क्वारेन्टिन सेन्टर बन्द गरिएका छन् भने होल्डिङ सेन्टर पनि हटाइसकिएको छ । कानुन मन्त्रालयले जनाए अनुसार अहिले ८ वटा जिल्लाबाट भारतसँग नाका जोडिएको प्रदेश २ मा भारतबाट आउने/जाने कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन।
शरीरको तापक्रम परीक्षण गरेर आवत जावत गर्न दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुशहवा बताउँछन् । तत्काल नाकामा कडाइ गर्ने तथा क्वारेन्टिन सेन्टरलाई सक्रिय गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै छलफल भएको छैन । त्यस्तै भारतसँग मुख्य नाका जोडिएको प्रदेश १ मा पनि होल्डिङ र क्वारेन्टिन सेन्टर विगत् २ महिनादेखि निस्क्रिय छन् ।
संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा खटाइएका जनशक्ति फिर्ता बोलाइएको थियो । भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि झापाको भद्रपुर र काकड्भिट्टा, इलामको पशुपतिनगर, मोरङको जोगमुनीलगायतका नाकामा कडाई गर्ने तयारी गरिएको छ । तर यसबारे सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वय समेत आवश्यक हुने भएकाले अहिले कुनै निर्णय नगरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल बहादुर थापाले बताए । उता भारतसँग खुला नाका जोडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरलाई सक्रिय गराउन हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढेको प्रदेश कानुन मन्त्रालको भनाइ छ ।
नेपाल भित्रिनेका लागि बिमानस्थलमा के छ व्यवस्था ?
हाल नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट देखिएका देशबाट नेपाल भित्रिएका नागरिकले अनिवार्य १० दिन क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकलाई १४ दिन होम क्वारेन्टिनमा बस्ने गरी घर पठाउने गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणपछि ‘ट्राभल हिस्ट्री’ हेरेर संस्थागत वा होम क्वारेन्टिनमा बस्ने भन्ने निर्णय गर्ने गरेको छ ।
छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दोस्रो लहर तीब्रगतिमा बढिरहेको समयमा चिकित्सकहरु पनि कोरोना भाइरसले जुनसुकै बेलामा झुक्याउन सक्ने र नेपालमा संक्रमण झन् भयावह हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।
‘भारतमा रोजगारीबाट फर्केका नेपालीबाट गाउँ–गाउँमा संक्रमण फैलने सम्भावना बलियो छ। नयाँ वर्षसँगै कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर देखा पर्न सक्छ’ भन्दै जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले अहिलेदेखि नै सावधानी अपनाउन नसके होलीपछि संक्रमण झैँ बढ्न सक्ने जिकिर गरे ।
त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डा. शेरबहादुर पुनले भारतमा फैलिएको संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहने सम्भावना निकै न्यून रहेको बताए। ‘अब मुलुकभित्र पनि संक्रमणविरुद्ध रणनीति तयार पार्नुपर्छ। एक वर्षको अनुभवबाट कमजोरी दोहोर्‍याउनु भएन। उनले भने। पुनले कोरोनको नयाँ भेरियन्ट देखिए पनि जनस्वास्थ्य मापदण्ड भने परिवर्तन नहुने बताए । ‘भेरियन्ट नामक कोरोना भाइरसको चेन ब्रेक गर्नको लागि सामाजिक दुरी, मास्कको अनिवार्य प्रयोग र हात धुने कुराहरु नै मुख्य छन्’ उनले भने।
नेपालमा फेरि होला लकडाउन ?
गत वर्ष नेपालमा चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गरिएको थियो । गत वर्ष नेपालमा संक्रमण तीब्र देखिएको सिजन (समय) फेरि आउँदैछ । तर सरकारी अधिकारीहरू फेरि लकडाउन हुने/नहुनेबारे यकिन साथ भन्न सकिरहेका छैनन् ।
यसै विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि तत्काल लकडाउन गर्ने योजना नभएको बताएको छ । सीसीएमसीका सदस्य सागर दाहालले भारतमा संक्रमण दर पुनः बढेसँगै नेपालमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाइने तर तत्काल लकडाउन गर्ने योजना भने नभएको बताएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले अहिले जनतालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध मात्र गरेको बताउँदै जनताले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको खण्डमा सरकारले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने बताए । ‘छिमेकी मूलुक भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै र आममानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेकाले हामीले अनुरोध गरेका हौं,’ उनले भने, ‘अझै पनि मानिसहरूले हेलचेक्र्याईं गरे भने सरकारले जुनसुकै कदम चाल्न पनि सक्छ ।’
त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. अनुप बाँस्तोला अहिले आममानिसलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि अनुरोध गरिएको र यही अवस्थामा लकडाउन गर्नु नपर्ने बताउँछन् । ‘हामी अझैपनि कोरोना जोखिममै छौं, त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्यौं भने भारतको जस्तो ह्वात्तै कोरोना संक्रमित बढ्न पाउँदैन उनले भने।
खुल्लामञ्चमा खुवाइरहेको नि:शुल्क भोजन आजबाट प्रसुति गृह नजिकै